.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ရဲလေး - တတိယကာရန် Album
ရဲလေး - တတိယကာရန် Album
ရဲလေးရဲ့ သီချင်းတွေကို တင်ပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် တတိယကာရန် Album လေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်း စုစုပေါင်း ၁၄ ပုဒ်ပါပြီးတော့ အားလုံးနီးပါး လူကြိုက်များပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ....။
1 အားလုံးအတူတူ Feat: Jocker Click Here !! 2.00 MB
2 ငါဘာမှမသိ Feat: Jenny Click Here !! 2.00 MB
3 ကိုယ့်ရဲ့ကွက်လပ် ရဲလေး Click Here !! 2.00 MB
4 ဘာစားမှာလဲအစ်ကို Feat: ထိန်ဝင်း Click Here !! 1.60 MB
5 တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း Feat: သားကြီး Click Here !! 2.00 MB
6 ဝမ်းတူး ဝမ်းတူး Feat: Jocker Click Here !! 1.90 MB
7 မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး Feat: အိမ့်ချစ် Click Here !! 2.00 MB
8 ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို Feat: အစ္စဏီ Click Here !! 2.00 MB
9 မဟုတ်ရပါဘူး Feat: ထိန်ဝင်း Click Here !! 1.60 MB
10 ရိုးမြေကျ ရဲလေး Click Here !! 2.30 MB
11 မင်းနဲ့ပျော်ချင်လို့ ရဲလေး Click Here !! 1.50 MB
12 နတ်သမီး Feat: အစ္စဏီ Click Here !! 2.00 MB
13 တစ်ယောက် တစ်မျိုး Feat: Ah Boy Click Here !! 2.00 MB
14 မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး Feat: လွမ်းပိုင် ၊ အိမ့်ချစ် ၊ Bobby Soxer Click Here !! 2.10 MB
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ Mp3 သီချင်းဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။
Posted by Thurainlin at 06:12